HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo Bisha Janaayo u Dhaqaaqeysa Xidig ka tirsan Kooxda Basel
November 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Basel Arthur Cabral inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
23-sano jirkaan ayaa dhaliyay 61 gool, waxaana loo diiwaan geliyay 17 caawin 99 kulan oo uu u saftay kooxdiisa Switzerland tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Palmeiras.
Xiliciyaareed kan, Cabral waxa uu dhaliyay 23 gool waxana loo diwangeliyay 8 caawin 24 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, taas oo keentay in la isla dhex maro mustaqbalkiisa.
Sida laga soo xigtay Sport , xiddiga reer Brazil – oo hore loola xiriirinayay Leeds United – ayaa loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican ee kor u qaadi kara weerarka Barcelona inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee Janaayo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Basel ay diyaar u tahay inay ku iibiso Cabral inta u dhexeysa €15m (£12.6m) iyo €20m (£16.8m) bilowga 2022, qandaraaskiisuna wuxuu dhacayaa Juun 2023.
Barcelona ayaa isha ku heysa inay lasoo saxiixato weeraryahan cusub bisha Janaayo iyadoo lasoo jeedinayo in Sergio Aguero lagu qasbi karo inuu ka fariisto xirfada kubada cagta sababtoo ah dhibaatada wadnaha ka heysata.